ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): September 2006
Posted by Anonymous at 4:27 PM2comments Links to this post
Posted by Anonymous at 10:48 AM 1 comments Links to this post
ဒီပို့စ်ကတော့ သက်နိုင်ဘလော့ခ်ကနေ ယူထားတာပါ.. ယောက်ျားတွေဖြစ်ပြီး ယောက်ျားသတ္တိလည်းမရှိ ၊ သူများအလုပ်ကိုလည်း လိုက်နှောင့်ယှက်လွန်းသော ယောက်ျားမဆန်သောသူများနှင့် မိမိကိုယ်မိမိ ဝေဖန်သုံးသပ်သင့်သူများ ဖတ်သင့်ပါတယ်.. အသွေးထဲကို အားမာန်ပေးတဲ့ အမေစုစကားတွေကိုတင်ပေးတဲ့ သက်နိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်……….
မင်းအသိုင်းဝိုင်းက တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားပြီး ဒါတွေဟာ မင်းကြောင့်လို့ ၀ိုင်းဝန်း အပြစ်တင်ကြတဲ့ အခါမင်းဟာ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်။
အားလုံးက မင်းကို မယုံသင်္ကာဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ရင်းနဲ့ မင်းကိုမင်း ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်။
စောင့်သင့်တဲ့ အချိန်ကိုစောင့်ပြီး အဲဒီအတွက်လည်း မမောပန်းဘဲ နေနှိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းရဲ့အကြောင်း မတရားမုသားစကား ကြားတဲ့အခါ မင်းကလည်း အလိမ်အညာ တွေနဲ့ ပြန်မတုန့်ပြန်ဘူးဆိုရင်။
မင်းကိုလူတကာက ၀ိုင်းမုန်းတီတဲ့အခါ မင်းဟာအမုန်းတွေ ပြန်မပွားဘူးဆိုရင်။
မင်းကိုယ်မင်း လူတော်တယောက်ရယ်လို့ မမြင်ပဲ ပညာရှိစကားတွေကိုလည်း မလွန်ဆန်ဘူးဆိုရင်။
စိတ်ကူးယဉ် အိမ်မက်တွေဟာ မင်းအပေါ် မလွှမ်းမိုးစေပဲ တွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။
အောင်မြင်မှုသုခနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဒုက္ခတွေကို ကြုံတွေရတဲ့အခါ တူညီသော လောကခံတရားပါးလားရယ်လို့ ခံယူထားနှိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းရဲ့ အမှန်စကားတွေကို လူလိမ်လူညစ်တွေက လှည့်စားပြောင်းလဲပြီး မုသားအဖြစ် ထောင်ချောက်ဆင် ညစ်တဲ့အခါ မင်းဟာတည်ငြမ်စွာနဲ့ နာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းဘ၀တစ်ခုလုံးကိုပေးပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့် ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ အင်မတန်မှ သေးငယ်လှတဲ့ တန်ဆာပလာအရာရာနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းနိုင်ခဲ့သမျှတွေအားလုံးဟာ ကြွေတလက် ကြယ်တခုန်ပမာ တလည့်တခါတည်နဲ့ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်။
ဆိုးလှတဲ့ ကံကြမ္မာရယ်လို့ ဘယ်သောအခါမှ ညည်းညူမနေဘူးဆိုရင်။
သူများတကာလုပ်ပြီးသွားလို့ အချိန်အတော်ကြာမှ မင်းအလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါ မင်းတယောက်တည်းနဲ့ပဲ အားနဲ့မာန်နဲ့ ဇွဲသတ္တိရှိရှိ ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်။
မင်းမှာစိတ်အားကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့တဲ့အခါ အဲဒီစိတ်အားကို ခိုင်မာစွာနဲ့ပဲ ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်။
လူတွေနဲ့ထိတွေ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်း နိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းဧကရာဇ်တွေနဲ့ အတူလမ်းလျှောက်နေရပေမဲ့ မာန်မာနသွေမကြွဘူးဆိုရင်။
ရန်သူကဖြစ်စေ မိတ်ဆွေကဖြစ်စေ မင်းကိုသပ်ပြီးနာကျည်းအောင် မလုပ်နိုင်ရင်။
လူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးစားရပေမယ့် စွဲလမ်းမှုသံယောဇဉ်တွေ ထားမနေဘူးဆိုရင်။
တိုတောင်းလှတဲ့ မပစ်ပယ်နိုင်တဲ့ တမိနစ်အတွင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိလှတဲ့ စက္ကန့်ခြောက်ဆယ်အဖြစ် အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းဟာအရာရာရှိတဲ့ အရာရာဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လို့ အရာရာဘာမဆို မင်းစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီပေါ့။ အဲဒီတော့ မင်းဟာလည်း ယောကျာင်္းကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့။”
Posted by Anonymous at 11:36 PM3comments Links to this post
So, if you areaNLD member orasupporter of the CRPP/ Committee Representing People's Parliament /or NLD/National League for Democracy / or DASSK/ Daw Aung San Suu Kyi ’s movements and also interested in beingamember on this forum, you are welcome to join us.
Posted by Anonymous at 11:27 PM0comments Links to this post
မြန်မာပြည်အရေးကို လုံခြုံရေးကောင်စီက ဆွေးနွေးတော့မယ့်ပွဲမှာ တရုပ်နှင့် ရုရှားကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြမှာပဲ.. မြန်မာပြည်အခြေအနေကို အ၀ီဇိ ငရဲပြည်ထိရောက်အောင် ကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ ဒီ၂နိုင်ငံလည်း အတော်ပြသနာပါပဲ…. အမေရိကန်ကန်အစိုးရကို ကြေးမုံသတင်းစာပေါ်ကနေ ပြန်တုံ့ပြန်နေလို့ ဟိုကလည်း သိပ်ဂရုစိုက်လှမယ်ထင်မနေပါနဲ့…. ပြည်တွင်းကလူတွေကိုအမှောင်ချနေပေမယ့် သတင်းဆိုတာ ထွက်နေတာပါပဲ.. တရုပ်ကြီးတွေက ဘေးကနေ ကန့်ကွက်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောနေတဲ့နအဖလည်း မာလနဲ့ဈာန်ကြွကိန်းနီးနေပါပြီ…. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးဖို့ နအဖကို သွားမတောင်းဆိုပါနှင့်… မိန်းမတစ်ယောက်ကို လက်နက်တွေအများကြီးနှင့် ဘာအပြစ်မှ ထောက်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဖမ်းထားတယ်ဆိုကတည်းက သူတို့အဆင့်ဘာလည်း တန်းခနဲသိလိုက်ရပြီပဲ….
မြန်မာပြည်အဓိက ရှေ့မဆက်နိုင်တာ သာကူးတွေများနေလို့ပါ.. သာတဲ့ဘက်ကို ကူးနေတဲ့ ကိုသာကူးနဲ့ မသာကူးတို့ကြောင့် တိုင်းပြည်က တော်တော်လေးနဲ့ ခေါင်းမထောင်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်… ကျွန်မ အရှေ့ဘက်စာမျက်နှာတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ ထမင်းနို့ဆီဘူး ၃လုံးထက်လည်း ပိုမစားနိုင် ၊ အ၀တ်၁ထည်ထက်လည်း ပိုချမ်းသာလွန်းလို့ ၀တ်မရတဲ့ လူဖြစ်လာရာ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကျေးဇူးပြုပြီး မိမိတစ်ဘို့တည်းသာ မကြည့်ကြပါနှင့်.. အချို့သောသူများက မိမိဘ၀ပေးအခြေအနေကြောင့် တပ်မတော်မှာ အမှုထမ်းနေရပေမယ့် သူများလို မလိုအပ်ဘဲ တအားမဖား ၊ မရက်စက်ဘဲ ခွပ်ဒေါင်းဘက်ကို စိတ်ကဦးခိုက်ပြီး လူက နအဖဘက်မှာနေနေရတာတွေ ရှိပါတယ်.. တစ်ချို့ကလည်း ဒီမိုကရေစီ အရေခွံကိုခြုံပြီး သာကူးလုပ်နေသူများလည်းရှိပါတယ်.. ကျေးဇူးပြုပြီး ဒေါင်းယောင်ဆောင်သော ကျီးဘ၀ကို မခံယူပါနဲ့.. မိတ်ဆွေရဲ့ဘ၀အခြေအနေက ငတ်ပြတ်ခွက်မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင် အင်းယားလမ်းမှာတိုက်တစ်လုံးပိုင်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ်ကားတစ်စီးစီးရဖို့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ ယုတ်မာမှု ၊ သတ်ဖြတ်မှု ၊ တော်လှန်ေ၇း နိုင်ငံေ၇းသမားစစ်စစ်တွေကို ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်သင့်ဘူး…. တစ်ယောက်အားနှင့်ယူသော်မရ ၊ အမေစုကိုယ်တိုင် ဘာမှလုပ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပက မြန်မာတွေ လက်တွဲရမယ့် အခြေအနေပါ.. အရေးကြုံ၇င် သွေးစည်းပါ.. အခု မြန်မာပြည်မှာကသွေးစည်းပေမယ့် လှုပ်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အပြင် အားလုံးက ပြိုလဲတော့မယ့် အိမ်တစ်ဆောင်နဲ့တူနေပါတယ်.. နယ်စပ်မှာ အနာဂတ်မဲ့နေတဲ့ကလေးတွေ ၊ တောတောင်ထဲမှာ အိမ်ယာမဲ့စွာ တစ်ဝမ်းစာအတွက် မနည်းရုန်းကန်နေရ ၊ လမ်းဘေးမှာ ၀မ်းရေးအတွက် ဘ၀ကိုရောင်းစားနေရတဲ့ မြန်မာမိန်းမပျိုလေးတွေအားလုံး အားလုံးအရေးကို ကြည့်ကြပါ… နအဖက ယုတ်မာဖို့သင်ပေးလိုက်ပေမယ့် မိမိဦးနှောက်ကိုအသုံးပြုပြီး လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ဆုံးဖြတ်ကြပါ..
မြန်မာတွေ ဘာအတွက်လူလုပ်မှာလည်းဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုက အတော်လေးမှန်သလို ထိချက်ပြင်းတဲ့အတွက် မြန်မာတွေဘာအတွက်လူလုပ်မှာလည်းဆိုတာသိဖို့ဝေမျှလိုက်ပါတယ်.
Posted by Anonymous at 4:38 PM2comments Links to this post
လေတပ်စစ်သည်ဟောင်း ကိုအောင်ဘုန်းမြင့်ပြောခဲ့သော အကြောင်းရင်းက လိုရင်းကိုထိသလို သိပ်ကိုတိကျ မှန်ကန်လွန်းပါတယ်.. တပ်မတော်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကိုထိပါးသူကို ကာကွယ်ဖို့သက်သက်ပါပဲ… တိုင်းပြည်ရဲ့ နေရာတကာ အုပ်ချုပ်ရေးတွေကို ခြယ်လှယ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး… ပြည်သူတစ်မျိုးလုံးကို အငတ်ထားပြီး သူတို့သာ အကောင်းဆုံးသောဇိမ်ခံဘ၀ကို စံစားနေသော ဦးနှောက်မဲ့စစ်အာဏာ၇ှင်များအနေဖြင့် ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလည်း ဘယ်လိုကောင်းအောင် ပြန်ပြုပြင်ယူမလည်း မစဉ်းစားမတွေးတောဘဲ ပိုဆိုးအောင်သာ လုပ်နေတာ ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်… တကယ်တော့ပြုပြင်လို့လည်း မရတော့တာ.. တစ်ခုခုကို အစဆွဲလိုက်မိပြီဆိုရင် တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်သွားတာ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့မရှိမှပဲ တိုင်းပြည်က ကောင်းမယ့်အခြေအနေဆိုက်နေခဲ့ပြီ….
Posted by Anonymous at 12:38 PM 1 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 11:07 AM2comments Links to this post
Posted by Anonymous at 1:00 AM3comments Links to this post
ဒီကနေတော့ အတော်ကို လေးစားဖို့ကောင်းသော အကိုကြီးတစ်ဦးနဲ့စကားပြောလိုက်ရတယ်.. လင်းလက် စာစရေးခဲ့တဲ့အချိန်ကစ ကိုယ့်ထက် အများကြီးပိုသိနားလည်သော လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ လူတွေအများကြီးနဲ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်.. လင်းလက်မှာ မရှိသေးတဲ့ ဗဟုသုတ ၊ နောက် အကျိုးအကြောင်းတော်တော်များများကို အများကြီး လမ်းညွန်ပြသပေးနေကြတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးမှ လေးစားခင်မင်ရသော အကိုကြီးများ ၊ အမကြီးများ အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ ပထမဦးဆုံး ရိုသေစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်… လင်းကို ညီမငယ်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ခင်မင်ကြသော ၊ လင်းကို အားပေးကြသော ၊ လင်းမသိသော အကြောင်းအရာများ ၊ အတွေ့အကြုံများအားလုံးကို ဂရုတစိုက် အရေးတယူ ရှင်းပြကြသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမှ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲတင်ရှိပါတယ်..
အခုတော့ စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုက မုဒိန်းမှုပါ … မြန်မာပြည်ရဲ့ ကျေးဇူးကြီးမားလှသော ကျေးဇူးသခင် စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းမှ ထမင်းစား ရေသောက်လို ကျူးလွန်နေသော မုဒိန်းမှုတွေပါ.. နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဘက်မှ မိန်းကလေးများကို ဖမ်းဆီးရရှိလျင် နှမချင်းမစာနာ ၊ အဖွဲ့လိုက် မုဒိန်းကျင့်ကြသော စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အသားများကိုတော့ တကယ်ကိုစက်ဆုပ်မိပါတယ်… ကျေးလက် တောရွာတွေကို တပ်သားတွေ ဆင်းပြီဆိုရင် မိန်းမမြင်ရင် နှာထကြပြီး ဖျက်ဆီးကြတဲ့အမှုကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ရေတွက်မရအောင် များပြားလွန်းလှပါပြီ… တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာတွေက တိုင်းရင်းသူတွေကို ဖျက်ဆီး ယောက်ျားကိုသတ်တယ်ဆိုတာကလည်း ရေးရင် တစ်သက်လုံးတောင် နားရမှာမဟုတ်ပါဘူး.. စစ်သားတစ်ယောက်က မိန်းမတစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင် ဘာအမှုမှတက်ဆွဲလို့မရပါဘူး.. ဥပဒေသာ မသတ်မှတ်ထားပေမယ့် ဒါက လူတိုင်းသိတဲ့ မတရားသော ဥပဒေလို ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ.. နိုင်ငံခေါင်းဆောင်က အသုံးမကျချိန်မှာ အောက်ကလူတွေအားလုံးကလည်း ရရှိသော အခွင့်အရေးကို အသုံးချ ၊ မိမိလူမျိုးခြင်း မစာနာ ဖျက်ဆီးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက် ငရဲခန်းကို ဘယ်လောက်ဆောက်ပေးရမလည်း တောင် မသိ… မြန်မာပြည်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုက အနောက်တိုင်းလို မဟုတ်ပါဘူး.. မိန်းကလေးတွေက မိမိအရှက်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြီး အမျိုးသမီးကောင်းဖြစ်အောင် နေထိုင်ရသော ယဉ်ကျေးမှုပါ.. မိန်းမတွေအတွက် ပဓာနကျသော အရှက်သိက္ခာကို ဖျက်ဆီးနေကြသော မုဒိန်းတပ်သားများအားလုံးကို တစ်နေ့ လက်တစ်ချောင်းဖြတ် ၊ နောက်တစ်နေ့ ခြေတစ်ဖက်ဖြတ် အဲလိုသတ်ရင်တောင် ကျေအေးမှာ မဟုတ်နိုင်ဘူး.. လူမိုက်ဆိုတာ သေခါနီးရင် ဒူးတုန်အောင် ကြောက်ကြတယ်.. သူများသားသမီးကို ဖျက်ဆီးတုန်းက အဆီတ၀င်းဝင်းဖြစ်နေတဲ့ အခွက်တွေက သေခါနီးကျတော့ ဒူးထောက်တောင်းပန်လိုက်ကြတာ အတော်တရားကျဖို့ကောင်းပါတယ်.. တစ်နိုင်ငံလုံး အမျိုးသမီးတွေကို ဘယ်အတန်းရောက်အောင် လုပ်နေတာလည်း စစ်အာဏာရှင်ရယ်…
ဘလော့ခ်ကို ဟိုတစ်ယောက် ၀င်ဖျက်သွားတုန်းကတောင် အခုရက်လောက် စိတ်ဓါတ်မကျဘူး… အခုရက်ပိုင်းတော့ ဒီဘလော့ခ်ကို နောက်ခံပြောင်းလိုက် ၊ စာလုံးအရောင်တွေညှိလိုက် ၊ လင်းက ဘာမှမသိတော့ သောက်တလွဲဖြစ်လိုက် ၊ နောက် IE & firefox မှာ ဒီဇိုင်းမတူဘဲ ဘလော့ခ်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်း ၂ခုထွက်လာလို့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်နေရတယ်.. နဂိုကတည်းက စာပဲရေးတတ်တယ်လို့ ပြောထားတာ အခုရက်ပိုင်းတော့ ရူးပါရူးချင်သွားတယ်… ကြားထဲ ဘတ်ဂရောင်းကို ဖျော့ဖျော့လေး ဖြစ်အောင် ပြောင်းလိုက်တာ စာလုံးအရောင်တွေအားလုံး ကုလားရောင်ဖြစ်ကုန်ပြီး ဘာတစ်လုံးမှဖတ်မရတော့ဘူး……. အပြာပေါ်အ၀ါထပ်သလို ဖြစ်ကုန်တယ်… လူလည်း ပူထူပြီး သူများမေးရတယ်.. လင်း ဘလော့ခ်အသစ်အတွက် အစစအရာရာကူညီပေးခဲ့သော သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ဦးနှင့် အကြံပြုခဲ့သော သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်.. ဘာမှမသိဘဲ လျှောက်လုပ်မိကာ အမှားများဖြစ်တိုင်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သော သူငယ်ချင်းလည်း အတော်စိတ်ညစ်နေပြီထင်ပါတယ်.. သြော်မသိတော့လည်း တစ်ဒုက္ခပါပဲနော်………..
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရှားပါးမိန့်ခွန်းများနှင့် စာအုပ်အချို့ကို ဒီလင့်ခ်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Anonymous at 2:15 AM4comments Links to this post
(ဒီမိုကရေစီ)၃ -- ဒို့အရေး
(ဒီမိုကရေစီ)၃ -- အားလုံးအတွက်
(ဒီမိုကရေစီ)၃ -- ဒီမိုကရေစီ
Posted by Anonymous at 2:06 AM 1 comments Links to this post